Ko Gyi Zein's Ho-sat-sat D-sat-sat: Google ရဲ့ Body Browser နဲ့ လူ့ခန္တာကိုယ်ကို ရှိူးမယ်
အနုလုံ၊ ပဋိလုံ လှည့်ပတ်ကြည့်နိုင်ဘို့
Body Browser ကို
လေ့လာဘို့ကောင်းတဲ့ နေရာတစ်ခုလို့ ထင်ပါတယ်။
တကူးတက ခွဲစိတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ :)
လောလောဆယ်တော့ Firefox4beta (သို့) Googlr Chrome9Beta နဲ့ပဲ အဆင်ပြေဦးမှာပါ။
(2011-Jan-12 မှာ Firefox4beta နဲ့ ဝင်လို့ ရနေပါသည်။)
Firefox4beta နဲ့ဆို ဒီလို စက်တင် ချိန်ထားရပါမယ်။
WebGL is supported in Firefox/4.0b1 http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-beta.html and in the nightly builds of Firefox. Visithttp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/nightly/latest-trunk/ for builds on Linux (32- and 64-bit), Mac OS X and Windows.
Googlr Chrome9Beta နဲ့ဆို ဒီလို စက်တင် ချိန်ထားရပါမယ်။
credit to: Getting WebGL in Chrome at the moment
Posted by Ko Gyii at 4:59 PM